Injini Yokuqhathanisa Ubuhle: Izincomo ze-AI ezenziwe ngezifiso Eziqhuba Ukuthengiswa Kwezobuhle ku-inthanethi | Martech Zone
Akekho owayengabona ukuthi umphumela we-apocalyptic i-COVID-19 uzoba nawo ezimpilweni zethu zansuku zonke nakwezomnotho futhi ikakhulukazi ekuthengiseni ngokuvalwa kwezitolo eziningi ezihola phambili zomgwaqo. Kwenziwe imikhiqizo, abathengisi, nabathengi konke bacabanga kabusha ngekusasa lokuthengisa kabusha.
Injini Yokufana Kobuhle
Injini Yokufana Kobuhle™ (BME) yisisombululo sabathengisi abathile, ama-e-tailers, izitolo ezinkulu, abalungisa izinwele kanye nemikhiqizo. I-BME yinjini entsha enezimpawu ezimhlophe eyenziwe nge-AI ebikezela futhi yenze ngokwezifiso ukukhetha komkhiqizo abathengi abangase bathenge. Kanye nokukwazi ukuncoma imikhiqizo iBME yenza ngezifiso wonke amaphuzu ohambo lwekhasimende oluku-inthanethi kusuka ekuthengisweni okuphezulu kuya kumakhasi okufika.
Njengosomabhizinisi wezobuchwepheshe, lokhu akusuye umsunguli UNidhima KohliIsixazululo sokuqala sedijithali. UNidhima futhi ungumsunguli we Ukufana Kwami Kwezobuhle™ (MBM), eyasungulwa ngo-2015 futhi isibe isincomo sokuqala somkhiqizo womuntu siqu somuntu siqu kanye nesiza sokuqhathanisa intengo okungenye yamawebhusayithi amahle kakhulu emhlabeni imikhiqizo engaphezu kuka-400,000.
I-MBM isebenzisane nabathengisi bezinhle ezinhle nemikhiqizo ehlanganisa iHarrods, iHarvey Nichols, iLiberty, i-Look Fantastic, i-Clarins, uBobbi Brown, nokuningi, ivumela amakhasimende ukuthi ayithenge yonke kusuka kuwebhusayithi eyodwa kuphela bese iqhathanisa amanani. Ngenxa yokufunda okuvela ku-MBM, uKohli ukwazile ukuthatha imininingwane yeminyaka emihlanu, ahlaziye imikhuba yokuthenga yabathengi futhi ayisebenzise kumodeli yakhe entsha yebhizinisi iBME okuhloswe ngayo ukunikela ukuqonda okuyigugu namathuluzi wokuziphatha kuma-B2B's.
Ukwenza ngezifiso i-AI kuqhuba kanjani ukuguqulwa
Injini Yokufanisa Ubuhle isebenza zombili ngentshiseko, ngokwenza abathengi bafake imininingwane yabo besebenzisa i- Umsizi Ongenakumbona noma ikuphi ku-inthanethi ukufinyelela imibuzo yesitayela sokuxilonga esisebenzisanayo ngohlobo lwesikhumba sabo, ukukhathazeka kwesikhumba, ukukhathazeka ngezinwele nomzimba, nokuthandwa komkhiqizo noma kwephunga.
Le datha ivumela iBME ukuthi isebenzise i-AI nedatha ukuze income imikhiqizo efanelekile khona manjalo. Isebenza futhi ngokungenzi lutho, ngokubheka ukusebenza kokuthenga nokuphequlula. Ukuphathelene nesikhathi sangempela ubuhle Isixazululo siguqula okuhle kwamakhasimende ngokunika amandla ukuzibandakanya okuhlukile, okwenzelwe wena endaweni ngayinye yokuthinta ohambweni lwabo lokuthenga oluku-inthanethi kusuka kokuthengiswayo kuya kumakhasi okufika nezincomo zomkhiqizo.
Nge-BME, abathengi bathola umsizi othengisayo ngamunye, esitolo, njengolwazi oluku-inthanethi nakwezokunethezeka ekhaya labo. Njengoba izitolo sezivuliwe manje, i-BME nayo ingasetshenziswa kuma-touchpads esitolo esitolo ukudala isu le-omnichannel elisebenzayo. Izinga eliphakeme le- ukwenza ngezifiso nezincomo enikeza abathengisi amakhono okufakelwa okuhlakaniphile ngaphandle kokuwakha.
Futhi, manje kunanini ngaphambili lapho uguquko lwezentengiselwano luholwa yi-world post-COVID entsha kunesidingo esikhulu somkhakha wokuthengisa ukusebenzisa inkundla ye-BME ukuqinisekisa impumelelo futhi okubaluleke kakhulu ukusinda kwebhizinisi labo kule nkinga yanamuhla ebucayi isimo sezulu.
Lesi yisikhathi sokuqala ukuthi kwenzeke, ithuluzi elenziwa ngokwezifiso lenzelwe imboni yezobuhle futhi linikwa amandla yimininingwane yokuncintisana ebingazwakali nhlobo ngaphambili.
Ngakho-ke isebenza kanjani iBME?
Ngokuhlanganisa i-AI nobuhle obuqonde ubuhlakani kanye neminyaka emi-5 yokuncintisana kobuhlakani, iBME isebenzisa ama-algorithms wokufunda womshini onamandla ukukhomba amaphethini angahambisani ngaphakathi kwedathasethi yomthengi. Ngamanye amagama, i-BME ikhomba imikhiqizo yobuhle ekhethwayo ngeminyaka, ukukhathazeka kwesikhumba namaphethini wokuthenga. Lapho abathengi abaningi bevakashela isitolo esiku-inthanethi, ithuluzi lifunda ulwazi oluthe xaxa futhi lulungiselele ngokuzenzakalela.
Injini bese inciphisa ukukhetha kwamakhasimende, ibikezela ukuthi yimuphi umkhiqizo ikhasimende elingathenga kakhulu kuwo, likhuphule ukuthengisa, nokwethembeka. I-BME yenza ngezifiso izincomo zomkhiqizo, imikhiqizo ehambisanayo, ama-imeyili, amakhasi okufika, nokuningi ukuze abathengi bathole isipiliyoni esiphelele esenzelwe wena uqobo esiba nomthelela yenza ngcono ukuguqulwa kwezentengiso ngo-30 kuye ku-600%.
I-BME isetshenziswe ngempumelelo e-UK neFrench Pharmacy asebevele babona ukwanda ngo-50% kwe-AoV (Average Order Value) kanye no-400% wokukhuphuka kwamanani okuguqulwa athengiswe. IBME ibambisene nomkhiqizo wezimonyo we-premium nguTerry kanye nomunye wabathengisi bezobuhle abakhulu uDouglas.
Ngokuya ngocwaningo lwakamuva nje, abakwaBME benze izincomo zomkhiqizo wobuhle obungu-18m kuze kube manje. Kukhuphule i- inani le-oda elijwayelekile ngo-50% omuhle futhi kukhuphuke amazinga okuguqulwa ekuthengisweni yi-incredibe 400%.
Isincomo Sokuthengisa Esingafani Nobuhle Benjini
I-BME yamukela indlela esebenzayo ye-omnichannel ekuthengiseni kabusha njengoba isebenza kuyo yonke i-inthanethi, uhlelo lokusebenza, i-imeyili, nasesitolo. Okubaluleke kakhulu, iBME inikwa amandla yimininingwane yokuncintisana kanye nemininingwane yobuhle evela kososayensi bezimonyo abenza uphawu lweBME ubuhle bumataniswa ™ inembe ngokwengeziwe, iyiqiniso, futhi ithembekile ngokwemiphumela eyenziwe yaba ngeyakho. Futhi, le midlalo izuzisa izidingo zangempela zomthengi kusukela kumzuzu abhalisa ngawo, ngokungafani namanye amapulatifomu athatha isikhathi eside ukufunda imikhuba yomthengi.
Ngokombono webhizinisi i-plugin ithatha amaklayenti amahora angu-1-2 nje ukuthi ayisebenzise ukuze ingabi nomthelela omkhulu ekusebenzeni kosuku lwanamuhla kwebhizinisi labo futhi njengoba kuyisiteji esihlanganisiwe esisebenza nge-AI ngokuzenzakalela, amaklayenti angaphakamisa ukuvalelisa izinhlelo zemanuwali ezidla isikhathi.
Ihluke kanjani iBME?
Ngokuqhathanisa nezinye amapulatifomu wobuhle okwenziwe emakethe, iBME ayinikezi izincomo zomkhiqizo ezisuselwa kumibuzo kodwa futhi ibikezela indlela yokuziphatha kwabathengi futhi yenza kube ngeyakho YONKE indawo yokuthinta yesigaba SONKE sobuhle kusuka ezinweleni kuya kumaphunga kuya esikhumbeni somzimba nezinzipho. Kuyisipulatifomu esihlukile sobuhle esihlukile esincoma kuphela imikhiqizo efanele nemibala esebenza kuyo yonke imikhakha yobuhle kusuka esikhumbeni sezinwele kuya ezinweleni hhayi esigabeni esisodwa esifanele ikhasimende kuphela. Futhi, njengoba inikwe amandla yiminyaka engu-5 yedatha, idala ukukhushulwa kwamakhasimende ayo kanye nesipiliyoni samakhasimende abo kusukela ngosuku lokuqala.
Njengamanje emakethe kunezixazululo eziningi ze-360 degree ezenziwe ngezifiso ezingalungiswa ngobuhle njengoba zingacacisi ngobuhle, ngakho-ke azinikezi ukuphakama okufanayo kwe-400% ekuthengiseni njengokusebenzisa isixazululo esithile sobuhle noma kuthatha izinyanga ezi-3-6 ukuya ikhombisa ukukhuphula impela futhi iyincwadi yesandla impela.
Injini Yokuqhathanisa Ubuhle inendlela entsha yokwenza ubuhlakani bento yonke yokuthenga yabathengi kuyo yonke indawo yokuthinta ukusiza amakhasimende ukuthi athole ama-Beauty Matches ™ wawo ngokusebenzisa isici se-Virtual Beauty Assistant noma ngaphandle kweposi le-COVID. Silangazelela ukusheshisa intuthuko yabo ngokubalethela inethiwekhi yethu kanye nobuchwepheshe bethu embonini yonobuhle.
UCamille Kroely, iNhloko Yomhlaba Wonke Yezinsizakalo Ezivulekile Nezinsizakalo Zedijithali
Tikusasa lakhe lidijithali nempumelelo yezitolo ezidayisa ubuhle… .is i-Beauty Matching Engine ™.
Tags: aiubuhleinjini yokufanisa ubuhleubuhleBobbi BrownClarinsHarrodsUHarvey NicholsLibertyBheka kumnandiukuthengwa kwe-inthanethiokuqukethwe okwenziwe ngezifisoizincomo ezenziwe zaba ngezakhoizincomo
Ungawakha Kanjani umncintiswano we- #Hashtag ku-Social Media